आगामी बिहीबारदेखि देशभित्र हवाइ यातायात सञ्चालन हुँदै – Pokhara Voice
आगामी बिहीबारदेखि देशभित्र हवाइ यातायात सञ्चालन हुँदै
दिनमा ६४ आन्तरिक उडान, कुन गन्तव्यमा कति ?
By पोखरा भ्वाइस	 On १४ असार २०७८, सोमबार १७:३४
पोखरा भ्वाइस सम्वाददाता, असार १४, सरकारले आन्तरिक हवाई उडान खोल्ने निर्णय गरेसँगै आगामी बिहीबारदेखि देशभित्र हवाइ यातायात सञ्चालन हुँदैछ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दैनिक ६४ वटा उडान हुने गरी तालिका तयार पारेको छ ।
विमानस्थल प्रवेश गरेदेखि गन्तव्यको विमानस्थलबाट नबाहिरिएसम्म मास्क अनिवार्य
कुन गन्तव्‍यमा कति उडान ?
बुद्ध एयरले काठमाडौंबाट विराटनगरसम्म दैनिक चार वटा उडान गर्नेछ । तुम्लिङटार र सुर्खेतका लागि एक उडान राखिएको छ भने भद्रपुरका लागि तीन उडान तय भएको छ । सिमरामा दैनिक तीन, जनकपुरमा दैनिक तीन, भैरहवामा तीन, पोखरामा तीन, भैरहवामा पाँच, नेपालगञ्जमा तीन र धनगढीमा दुई उडान गर्ने गरी तालिका मिलाइएको छ ।
यतीले भद्रपुरमा दुई, विराटनगरमा तीन, जनकपुरमा दुई, सिमरामा दुई, पोखरामा दुई, भैरहवामा दुई, नेपालगञ्जमा दुईवटा उडानको अनुमति पाएको छ ।
श्री एयरलाइन्सले भद्रपुरमा दैनिक एक, विराटनगरमा एक, भैरहवामा एक, नेपालगञ्जमा र धनगढीमा दैनिक दुई÷दुई उडान गर्नेछ । सौर्य एयरको जहाज भने काठमाडौंबाट भद्रपुर, विराटनगर र भैरहवाका लागि एक÷एक उडानमा हुनेछ ।
काठमाडौंबाट लुक्का, फाप्लु, डोल्पा र सिमकोट गरी दुर्गममा विमानस्थलमा उडान हुने गर्छ । यी गन्तव्यलाई दैनिक ८ उडान तोकिएको छ । समिट, तारा र सीताले यो उडान उपयोग गर्न सक्नेछन् । मनसुन र पर्यटकीय सिजनसमेत नभएका कारण दुर्गममा भने यात्रुको चाप नहुने समिट एयरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज कार्कीले बताए ।
सुगम भेगमा यात्रुको चाप
बुद्ध एयरका सूचना अधिकृत दीपेन्द्र कर्णका अनुसार लामो समय निषेधाज्ञा रहेका कारण सबैजसो गन्तब्यमा यात्रुको अत्यधिक चाप रहेको छ । यात्रुले मोवाइल एप, कम्पनीको वेवसाइट, इसेवा तथा ट्राभल एजेन्सीबाट समेत हवाई टिकट बुकिङ गर्न सक्छन् । यसरी हुने बुकिङका यात्रुको धेरै चाप देखिएको उनको भनाइ छ ।
कर्णका अनुसार वर्षायाममा सडक यातायातमा जोखिम भएका गन्तब्यबाट अत्यधिक चाप रहेको छ । कम्पनीहरुका अनुसार पूर्ण क्षमतामा नखुलेसम्म हवाई टिकटको मूल्य भने सस्तो दरमा बिक्री गर्ने सम्भावना छैन । सरकारले हवाई टिकटको उच्च मूल्य तोकिदिएको छ । सो स्तर ननाघ्ने गरी टिकट बिक्री गर्दा पूर्ण क्षमतामा चलेजसरी सस्तो दरमा भने टिकट बिक्री नहुने कम्पनीहरुको भनाइ छ ।
यात्रुले कस्तो कुरामा ध्यान दिने ?
हवाइ यात्रुका लागि विमानस्थल प्रवेश गरेदेखि गन्तव्यको विमानस्थलबाट नबाहिरिएसम्म मास्क अनिवार्य गरिएको छ । विमानस्थलमा तोकिएको मार्किङमा उभिएर सामाजिक दूरी पालना गर्नुपर्ने छ ।
जहाजभित्र शौचालयको प्रयोग बन्द गरिएको छ । बदाम, जुसजस्ता जहाज यात्राका क्रममा खानेकुरा दिने सेवा समेत महामारीपछि रोकिएको छ । कोरोनाको लक्षण भएका यात्रुले जहाज चढ्न पाउने छैनन् । विमानस्थलमा ज्वरो नापेर मात्र प्रवेश दिने गरिन्छ ।
साविकको तुलनामा सामाजिक दूरी बढी होस् भनी प्रतिघण्टा ५ वटा मात्र उडान हुने गरी तालिका मिलाइएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भनाइ छ ।